Ilekọta spathiphyllum na ụlọ na ihe mere akwụkwọ na ntụ ntụ ji kpoo, gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ifuru "ntụrụndụ ụmụ nwanyị" na-agbanwe edo edo na otu esi elezi anya iji wepụ ihe kpatara ya? - Mkpụrụ ubi - 2020
Gini mere ahihia spathiphyllum na akwukwo ha? Kedu ụdị nlekọta nke osisi chọrọ n'ụlọ?
Okpokoro osisi nke "nwanyi obi ụtọ" ma ọ bụ dịka ọkà mmụta sayensị spathiphyllum rutere na Russia site na mba ebe okpomọkụ, ọ bụ onye na-ede uri bụ onye na-ahụ maka mmiri, ma ọ bụghị onye na-elekọta ya. Ya mere, ọ bụrụ na epupụta amalitela ịkụ ala ma gbanwee edo edo na ifuru, nke a pụtara na ihe na-adịghị mma na ya ma ọ bara uru ịṅa ntị na ya. Nke a na-akọwa n'ụzọ zuru ezu nsogbu nke ihicha nke spathiphyllum epupụta na-enye atụ aro na ntanetị.
Gịnị kpatara nsogbu a?
Nri na-ezighi ezi na enweghi ikuku ikuku
Mgbaghara ma ọ bụ ụkọ nke ihe ndị a chọpụtara
Kedu ihe na-esi na nlekọta na-ekwesịghị ekwesị maka "obi ụtọ ụmụ nwanyị"?
Kedu ihe ị ga - eme iji reanimate osisi ahụ n'ụlọ?
Mgbe nsogbu na efere mpempe akwụkwọ
Mgbe atụmatụ ahụ kpochapụrụ
Ọ bụrụ na ọrịa ahụ emetụta ọbụna okooko osisi na osisi ahụ na-agbanwe odo
Kedu akwukwo shrinkage?
Ntu ahihia bụ usoro nke na-agwụcha mkpụrụ ndụ mkpụrụ osisi, nke nwere ike ibute ọnwụ zuru oke nke osisi.
Ọtụtụ mgbe akwukwo ahihia na-egosi n'ihi nlezianya na-ezighi ezi, ya erughi mmanu.
Fatịlaịza a mịrị amị nke spathiphyllum adịghị anya site na ịchọ mma. Ha na-aghọ ndị na-adịghị ndụ na ndị gbara ọchịchịrị ma ọ bụ na-acha oji.
Spathiphyllum bụ osisi na-adịghị mma na nlekọta, mana e nwere ọtụtụ ihe mere ọ ga - eji gwụ mkpụrụ ndụ ya. Isi ihe kpatara akwukwo ahihia bu ebe anakpo osisi. Spathiphyllum adịghị anabata ọchịchịrị na ihe nchịkọta.
Ebe kachasị mma iji nọrọ ga-abụ ebe dị ọkụ ma ọ bụ kichin.
Enweghị mmiri mmiri, na ịba ụba ya na-emerụ osisi ahụ. "Obi ụtọ nke ndị inyom" ga-eme ka mmiri ṅụọ mgbe topsoil kpochara. Mgbe ọ na-ewe ọtụtụ awa site na ịgbara mmiri, kpochapụ mmiri si na pan.
N'ihi ebe ebe okpomọkụ si, "obi ụtọ nwanyi" adịghị anabata ikuku na-ekpo ọkụ. Mgbe ị na-achọ ihichapụ nke ntụ nke ifuru, ị ghaghị ịchacha ikuku n'ime ụlọ.
Enweghị ụlọ ime ụlọ apụghị ịnagide ìhè anyanwụ kpọmkwem na spathiphyllum abụghị otu. Ọ bụrụ na ị tinye spathiphyllum na ebe ìhè anyanwụ na-ada, n'oge na-adịghị anya osisi ahụ ga-akawanye njọ, akwụkwọ ga-amalite ịda mbà ma gbanwee edo edo. Osisi a adighi nma n'anya, ya mere o nwere ike idi n'ime ulo nke nwere onyinyo.
Iji zere wilting nke osisi n'oge oge okooko osisi ya, ọ dị mkpa ịkụnye ifuru na anụ ọkụ. Maka fatịlaịza kwesịrị ekwesị maka mmiri mmiri na-achọpụta maka ime ụlọ. Fatịlaịza ga-apụta n'ụzọ doro anya na ntuziaka ahụ.
N'oge oyi, spathiphyllum anaghị achọ fatịlaịza.. Ọ bụrụ na ịchichaa ya na fertilizing, mgbe ahụ, a ga-enwe ọtụtụ ihe ndị na-achọpụta, nke ga-emetụta osisi ahụ n'ụzọ dị njọ.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịmatakwu foto nke "obi ụtọ ụmụ nwanyị", nke na-ada nkụ:
Ihe umu obula choro anya, tinyere osisi. Spathiphyllum abụghị otu. N'agbanyeghị na ọ dị mfe - osisi a ka kwesịrị inye ya ihe kwesịrị ekwesị, na-elekọta ya.
Ihe ndị na-akpata nlekọta na-ezughị ezu nwere ike ịbụ ọtụtụ ihe.:
Akụkụ nke ike gwụrụ ga-aghọ ihe oriri dị mfe maka ahụhụ pests.
N'ihi ntakịrị ikuku nke ikuku na oke mmiri nke dị n'ime ya, epupụta nke osisi ahụ na-amalite ịgbanwuo oji.
Nri buru oke ibu na-eme ka eto eto. Tupu ịgbara, ị ga-ele anya iru mmiri na ndụmọdụ nke osisi ahụ. Ọ bụrụ na atụmatụ ahụ anya, ala ahụ akpọnwụbeghị maka mmiri ọhụrụ, ọ bụrụ na agbadaa atụmatụ ndị ahụ, ị ​​ga-agba mmiri ahụ ọkụ.
Nnukwu ikuku dị elu na-eduga n'eziokwu ahụ na ngwa ngwa nke akwụkwọ ahụ na-adị ngwa ngwa ma na-acha aja aja, mgbe ahụ kpamkpam.
Akwụkwọ na-amalite ịtụgharị edo edo.
N'ihi na ite nke na-ekwesịghị ekwesị, osisi ahụ nwere ike ọ gaghị eto ogologo oge. Ihe dị iche iche nke spathiphyllum bụ na ọ anaghị esite n'ime ite nke mgbọrọgwụ adịghị ejupụta ohere niile.
Mgbe epupụta nke osisi ahụ kpọrọ nkụ, nke mbụ ị chọrọ iji normalize ịkụzi osisi ahụ. Ghọta na ihe dị mkpa na mmiri dị mkpa, na nke - ọ dịghị. Ọ dị mkpa iji kpochapụ ihe nile na-akpata ka epupụta nke osisi ahụ kpoo.. Ịmepụta osisi ọzọ mmiri - ịkwesiri ịwụ mmiri mmiri mmiri n'ime ite. Adịghị afụ ụfụ ma na-eguzo n'akụkụ ikuku oyi dị nso.
Enweghị ihe ọ bụla a ga - eji mee maka ịgbara mmiri oyi. Ọ bụ onye iro nke osisi ọ bụla. Mmiri mmiri dị mma bụ okpomọkụ dị ọkụ nke ọ na-enweghị ihe ọ bụla ga-eme.
Kedu esi lekọta ifuru "nwanyi obi ụtọ", ma ọ bụrụ na ntụziaka nke akwụkwọ ahụ kpọrọ nkụ? Ịnweta akụkụ nke akwukwo osisi nwere ike ime n'ihi na mmiri na-egbubiga ókè. Na mbu na nke a, ọ dị mkpa:
Bufee osisi ahụ na ite a.
Saa ite ahụ n'onwe ya na ncha.
Ọ bụrụ na osisi ahụ agbaala mgbọrọgwụ, a ga-ebipụ ha.
Tinye ájá na nkume na ala nke ite (oke nke ngwakọta ekwesịghị ịfe 5 cm) ma dina ala ọhụrụ.
Weghazie osisi ifuru ahụ mebiri emebi.
Ọ bụrụ na ikuku nọ n'ime ụlọ dị oke ọkụ, mgbe ahụ, osisi ndị dị na ya ga-adị mkpa ka a gụọ ya. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ọ gaghị enyere aka? Ọ bara uru na-agbalị iji pịrị ọnụ ma ọ bụ ụrọ gbasaa na ala. A na-etinye ite nke okooko osisi n'elu ebe a.
Site na ntachu na osisi, naanị na-ebugharị ite ahụ na osisi ọzọ, ebe na-enweghị ike ịnweta ebe anyanwụ ga-enyere aka. O nwekwara ike iji ákwà kpuchie windo ahụ nke na-agaghị ahapụ ụzarị anyanwụ. Ọ bụrụ na e nwere ụfe nke nri, a na-atụ aro ka ịghafee osisi ahụ n'ala ọhụrụ. Mgbe a na-atụ aro site nchịkwa nke nkedo nke oghere nke ifuru na ngwugwu ncha ma ọ bụ fungicide.
Ọ bụrụ na osisi gị amalite ịgbanwuo okooko osisi odo, ị ga-amalite ozugbo ịzọpụta ya, n'ihi na ọ nwere ike iduga mbibi zuru ezu nke osisi ahụ.
Ọdịdị nke osisi akọrọ okooko osisi - ihe ịrịba ama nke ezughị ezu nri. Iji dozie nsogbu a, ị nwere ike iji nri fatịlaịza ọ bụla maka ụlọ ime ụlọ ma ọ bụ jiri usoro omenala nke oriri na-edozi ahụ.
Ọtụtụ ụzọ kwesịrị ekwesị:
Uwe elu na-eko achịcha: Yeasts nwere hormones nke na-eme ka akụkụ sel dị ike, si otú ahụ na-enye aka n'uto na mmepe zuru oke nke osisi. Ntụziaka: 10l. mmiri na ime ụlọ - 3 tablespoons shuga na akpa nke na-eko achịcha akuku ka ọ na-agbaji maka awa 4, mgbe ahụ mix na hà hà na mmiri na mmiri na osisi.
Onion Husk Fatịlaịza - nchebe site na ọtụtụ pests na ọrịa. Ntụziaka: Wunye otu njuaka yabasị bee na liter nke esi mmiri. Obụpde maka ihe dị ka nkeji iri, ma sie ike ruo awa abụọ, gbanye n'ime akpa ma gbanye osisi ahụ na osisi.
Mgbe ekpochapu nsogbu nke ihicha na yellowing nke epupụta nke osisi, ọ dị mkpa iji mepụta prophylaxis, igbochi nlọghachi nke nsogbu. Nke mbụ, iji gbochie ịsachaghachi ya dị mkpa iji soro iwu niile maka ilekọta ifuru "obi ụtọ nke nwanyi".
Ọ dị mkpa iji chọpụta ebe na-adịgide adịgide nke ifuru, nke ụzarị anyanwụ na-agaghị emerụ ya ahụ.
Iji gbochie ìhè anyanwụ kpọmkwem - megharia ifuru na ala mita site na windo ma jiri ikpuchi windo na tulle.
Ọ dị mkpa iji dozie okpomọkụ nke ikuku n'ime ụlọ ahụ.
Ọzọkwa, maka mgbochi, ọ dị mkpa iji na-eri nri osisi oge, ọkacha mma na organic, kama nri fatịlaịza.
Ọ bụrụ na ị na-agbaso ndụmọdụ ndị a dị mfe, ị ga-enwe ike nweta ọnọdụ dị mma nke spathiphyllum ma jigide ya n'afọ niile.
Ihe kachasị mkpa bụ ịkwado ma hụ ọnọdụ dị iche iche nke ịgha mkpụrụ:
họrọ ebe kwesịrị ekwesị iji tinye osisi ahụ;
nọgide na-enwe ezigbo iru mmiri n'ime ụlọ okpomọkụ;
mee ka osisi ahụ dị mma; emela ya nke ukwuu na mgbe mgbe.
N'ihi na emebe iwu ndị a, spathiphyllum ga-adị mma mgbe nile, ga-adọrọ mma ma mara mma.